Adventure Visa any India - Lohasaha Untamed any Ladakh
Ireo lohasaha Untamed any Ladakh
Eo afovoan'ny tandavan-tendrombohitra Zanskar, ny faritra Ladakh any India, fantatra ihany koa amin'ny hoe Mini Tibet ao amin'ny firenena noho ny fifandraisana ara-kolontsaina miorim-paka amin'ny fomba amam-panao Tibetiana, dia tany ahafahan'ny olona tsy mahay teny nefa manatri-maso ny hatsarany. Ary angamba 'tsy mitovy' no teny sisa tavela aminao rehefa tonga eto amin'ity faritra India ity ianao.
Noho ny azy mandalo ny haavon'ny toerana avo amin'ny alàlan'ny tendrombohitra karakaina dia fantatra ihany koa amin'ny tany mangatsiaka any India ary malaza amin'ny fitsangantsanganana bisikileta sy fitsangatsanganana manerana ny faritra.
India Visa Online (eVisa India)
Visa Indiana misy amin'ny Internet izao araka ny isan Governemantan'i India politika hanamorana ny fahazoana visa momba izany tranonkala. Afaka mahazo ianao Visa Indiana Online (eVisa India) amin'ny famenoana ny mifandraika Fangatahana fangatahana Indiana Visa. Ny fepetra takiana hahazoana Indian Visa Online na eVisa India dia ny fananana id mailaka miasa, fomba fandoavam-bola toy ny carte debit / carte de crédit na kaonty Paypal ary koa fidirana amin'ny Internet. Aorian'ny famenoanao ny taratasy fangatahana sy ny fandoavanao vola dia mety takiana aminao ny handefa mailaka na hampakatra ny kopian'ny scan scan anao ary hiseho ny sarinao. Afaka mamaky momba ny Fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny India visa ary Fangatahana sary India Visa.
Indian Visa dia misy amin'ny firenena 180 mahery, anisan'izany ireo avy Etazonia . India e-Visa (Indian Visa Online) dia karazany maro miankina amin'ny tanjon'ny dia. Visa fitsaboana Indiana, Business Visa ary Mpizaha mpizaha tany Visa no karazana eVisa karana indrindra izay avoakan'ny Governemantan'i India elektronika. Ny dikan'ny eVisa na Indian Visa Online dia ianao, tsy mila mitsidika ny masoivoho indiana, tsy mila mandefa pasipaoro, tsy mila mahazo tombo-kase amin'ny pasipaoronao, tsy mila mijoro ara-batana amin'ny filaharana na mandefa mailaka na mandefa antontan-taratasy. Azonao atao ny mangataka Fampiharana Indiana Visa izay azo vitaina ao anatin'ny 2-3 minitra ary mahazo eVisa ho an'i India amin'ny alàlan'ny mailaka. Azonao atao ny mitsidika ny seranam-piaramanidina na sambo Cruiseship na Charter ary manomboka amin'ny dianao mankany India. Ireo tompon'andraikitra misahana ny fifindra-monina dia hanamarina ny Visa ao anaty solosaina ary hamela ny fidirana ao India.
Rehefa mamakivaky an'i Ladakh ianao, dia ho fahitana mahazatra mamakivaky ireo arabe an-tendrombohitra avo, izay na dia miseho amin'ny toe-javatra misavoritaka indrindra aza nefa toa tsara tarehy ao amin'ity zava-mahatalanjona kanto ity.
Ladhakh, na dia toa tsy misy any ivelany aza, dia feno lohasaha mamiratra izay ao am-pony, mampiseho topimaso mahafinaritra momba ny kolontsaina mitambatra an'i Tibet sy Ladakh.
Ny lohasaha Zanskar dia iray amin'ireo lohasaha tsara indrindra ao amin'ny faritra voahodidin'ny tendrontany misy lanezy ao Himalaya mahery. Ireo lohasaha malaza any amin'ny faritra dia ahitana ny lohasaha Nubra izay hita eo amin'ny sisin'ny avaratry ny firenena mizara ny sisintaniny amin'i Xinjiang any Shina. Lohasaha Nubra no malaza indrindra amin'ny dia bisikiletany mandalo ny avo indrindra amin'ny pas pass ao Ladakh.
Jereo tsara toro-hevitra ho an'ireo mpitsidika raharaham-barotra tonga any India amin'ny Visa momba ny asa.
Iray amin'ny toerana avo indrindra Ramsar manerantany, ny farihy Tso Moriri na ny Mountain Lake miorina amin'ny haavo mihoatra ny 4000 metatra, voahodidin'ny tany mando ary toerana onenan'ireo vorona mpifindra monina dia iray amin'ireo farihy tsara indrindra sy avo indrindra any India.
Ny farihy dia eo ambanin'ny Tso Moriri Wetland Conservation Reservation ary iray amin'ireo tranokala Ramsar voatanisa, fanondroana ny faritra mando manan-danja iraisam-pirenena, ao amin'ny firenena. Na dia tsy mahasosotra aza ny mitoby eo akaikin'ny farihy, ny toerana dia manolotra hatsaran-tarehy avy amin'Andriamanitra ary miasa toy ny vatosoa manga miaraka amin'ireo tendrombohitra maizina.
Raha miresaka momba ny farihy, inona no mety ho sarin'ny farihy safira any amin'ny faritra rakotra tendrombohitra feno vovoka? Azo antoka fa tsy ho ambany noho ny firavaka kely mamiratra amin'ny tany hafahafa izy io.
Ny farihy Pangong Tso no farihy malaza indrindra eto Ladakh, miaraka amin'ny fitsidihana ity faritra India ity fa tsy feno nefa tsy mahita io vatosoa manga io. Ny farihy dia miovaova loko imbetsaka isan'andro miaraka amin'ny loko manga isan-karazany ka lasa mena miaraka amin'ny rano madio mangarahara. Raha maka fanahy azy ianao, dia aza manandrana milomano amin'ny mari-pana ambanin'ny zero! Ny fahitana avy any Pangong Tso dia zavatra iray izay azo antoka fa tsy ho azo hijoroana amin'ny toerana hafa.
Na ny farihy mangatsiaka any Ladakh aza, dia tsy latsa-danja amin'ny hatsaran-tarehy rehetra satria malaza be ny treks na dia amin'ny ririnina aza. Iray amin'ireo lohasaha malaza indrindra amin'ny filasy any amin'ny faritra koa ny lohasaha Markha izay heverina ho iray amin'ireo lohasaha tsara indrindra amin'ny fitobiana.
Jereo tsara Elisa visa Indiana.
Miasa amin'ny vavahady mankany amin'ny Glacier Siachen, ny Ny pass Khardung La no passable mandeha amin'ny motera avo indrindra eto an-tany miaraka amin'ny lalany mankany amin'ny lohasaha Nubra amin'ny faran'ny iray hafa. Ireo mpankafy fitsangatsanganana manerana ny firenena dia mandehandeha hatrany amin'ny lemaka avaratr'i India ka hahatratra ny lalana avoavo farany. Amin'ny faran'ny dia dia tianao ny tandrefana tsy misy an'i Zanskar mandray anao eo ambanin'ny lanitra azure.
Ilay teny hoe La
Inona ny teny hoe La mifamatotra amin'ny làlana rehetra any Ladakh?
Ladakh dia fantatra ihany koa amin'ny tanin'ny lakana avo, miaraka amin'ny teny La amin'ny fiteny eo an-toerana izay midika hoe mandalo tendrombohitra. Ny ankamaroan'ny pasess any an-tendrombohitra ao Ladakh dia feno ny teny hoe La. Ka io tokoa no tany La India.
Ao amin'ny iray amin'ireo pas tsy antsoina hoe La, dia misy toerana antsoina hoe Magnetic Hill, voahodidin'ny hantsana mamorona fiheverana optique, malaza amin'ny toetrany andriamby. Ka aza gaga amin'ny manaraka raha mahita fiara mijanona eto manohitra ny lalàn'ny hery misintona ianao satria toa mamaly ny antson'ny tendrombohitra!
Jereo tsara Visa Indiana Vonjy maika or Visa India Urgent.
Ny kolontsain'i Ladakh dia voataona be amin'i Tibet ary tsy mahagaga raha hita taratra amin'ny sakafo sy fety any amin'ity faritra ity, izay heverina ho ivon'ny Buddhism ao amin'ny firenena ihany koa. Mandritra ny fitsangatsanganana manerana ny faritra, ny fitsidihana ireo monasiteran'ny haavo avo dia zavatra tsy tokony hohadinoina na izany na tsy izany dia manolotra topimaso akaiky ny fomba fiaina nentim-paharazana Ladakh izy ireo.
Ny fiainan'ny mponin'i Ladakh dia azo antoka fa mifanohitra tanteraka amin'ny toerana hafa, miaraka amin'ny sakafo tsotra sy ny fomba fiainana anaovana ilay faritra sarotra.
Ny faritra mangatsiaka indrindra any India ary ny toerana mangatsiaka faharoa eto an-tany, Drass, any amin'ny distrikan'i Kargil any Ladakh, no iray amin'ireo toerana be mponina indrindra miaraka amin'ny maripana mitete ambany hatrany amin'ny 30 ka hatramin'ny 35 degre. Noho ny hatsiaka mamirifiry any an-tendrombohitra, ny nahandro Ladakhi dia matetika no voahodidin'ny paty, lasopy ary voamadinika ao amin'ny faritra toy ny orza sy varimbazaha.
Na dia nipoaka aza ny fizahan-tany tao amin'ilay faritra dia nanjary nipoitra ny safidin'ny sakafo maro avy any amin'ny lemaka avaratra malaza any India, fa rehefa handeha ho any amin'ity tany mistika ity, ny tsiro tany Zanskar tany am-boalohany dia hampiditra tsiro isan-karazany avy any Himalaya avy amin'ity faritra maina toa an'i India.
Thukpa, lasopy paty avy amin'ny Tibet sy dite dibera no malaza indrindra amin'ireo magazay eo an-toerana avy any amin'ny faritra. Ary raha sendra mitsidika ilay toerana ianao mandritra ny fetiben'ny monastera Hemis isan-taona, izay iray amin'ireo fety ankalazaina indrindra any Ladakh, dia toa feno loko kokoa noho ny mety ho nanatri-maso ny toerana hafa ilay tany toa tsy mahataona.
Fangatahana visa e-fizahan-tany any India